China zvinhu zvenaironi zvisungo, zvisungo, kutsungirira kukuru, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza zvinhu zvitsva, kuwedzera sikuruwa, kuwedzera pombi, kusarudzika kwakasiyana kwetiyeni fekitori uye vagadziri | Boda
Zvinhu zveNylon, zvisungo, kutsungirira kwakakwirira, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza zvinhu zvitsva, sikuru yekuwedzera, pombi yekuwedzera, mamwe maratidziro etayi
Zvisungo zveNylon zvakapatsanurwa kuita: kuzvisunga-kukiya matayiloni, matai enayoni zvisungo, mhenyu bharuki matayoni zvisungo, anti disassembly (lead chisimbiso) nylon zvisungo, yakagadziriswa musoro nylon zvisungo, plug (ndege yemusoro) zvisungo zvenayiloni, pinhole nylon ties, fishbone nylon zvisungo. , mamiriro ekunze anodzivirira nylon zvisungo, nezvimwe.
Nekuda kwehukuru hwezvigadzirwa (rakatetepa madziro, hombe jekiseni maitiro), iyo jekiseni kuumbwa maitiro uye zvigadzirwa zveyiloni zvisungo zvakanyanyisa. Vagadziri nyowani vatsva vanoda maitiro marefu ekutsvaga kuti vagadzire michina inokodzera. Iyo dhizaini ine basa rekumira kumashure (kunze kweiyo inofambiswa bhatani mhando), iyo inongogona chete kusimbiswa zvakanyanya kusimbiswa neinosvikika tambo tambo (yakasununguka bhureki).
Nylon tai inogadzirwa neL yakatenderwa nylon-66 zvinhu, ine mwero wemoto we94v-2. Iine yakanaka acid kuramba, ngura kuramba uye kuputira. Hazvisi nyore kuchembera uye zvine simba rakasimba rekutakura. Iyo yekupisa tembiricha iri - 20 ℃ kusvika + 80 ℃ (yakajairwa nylon 66). Inoshandiswa zvakanyanya mufekitori yemagetsi, inosunga maTV, makomputa uye mimwe mitsara yekubatanidza yemukati, magetsi, matoyi, matoyi emagetsi uye zvimwe zvigadzirwa, kugadzirisa pombi yemafuta yezvigadzirwa zvemagetsi, kugadzirisa tambo tambo pazvikepe, kurongedza mabhasikoro kana kusunga zvimwe zvinhu. . Inogona zvakare kushandiswa kusunga zvinhu zvakaita sekurima, kurima uye mabasa emaoko. Chigadzirwa chine hunhu hwekukurumidza kusunga, kuputira kwakanaka, kuzvivharira uye kusimbisa, nyore kushandisa uye zvichingodaro.
Inoshandiswa zvakanyanya muKisimusi yechipo fekitori, fekitori yemagetsi, waya kugadzira fekitori, waya uye tambo fekitori, toyi fekitori, festive Mutambo, stationery department chitoro, nyowani supamaketi, pekugara kushandiswa kwezuva nezuva, zvigadzirwa zvemagetsi, zvinobatanidza uye zvimwe zvinyorwa.
BOSENDA TOOLS inopa yakakwana nhevedzano yezvinhu zvenayiloni tayi zvigadzirwa, neruoko rwekutanga PA66 zvigadzirwa uye yakasimba simba mhirizhonga, yedu nylon zvisungo zvinotumirwa kune nyika zhinji pasirese.Kuti uwane rumwe ruzivo uye ruzivo rwehunyanzvi, inzwa wakasununguka kubata nesu.
Pashure: Zvipikiri uye zvekusunga, nzara dzesimendi, zvekuzvirovera pachepa, hexagon nzara, chikafu, zvipikiri zvakatwasuka, kuchera sikuru, kuwedzera sikuru, kumonyanisa zvipikiri
Zvadaro: Wedzera zvipikiri zvine screws, epurasitiki yekuwedzera sikuruu, yekuwedzera scew chipikiri yekuwedzera sikuruu, macacable clip
Wedzera mapikiri ane screws, epurasitiki yekuwedzera scre ...
Isimbi isina waya hexagon sikuruu, simbi isina waya ...
Zvipikiri uye zvekubatanidza, simende nzara, yekuzvibata uchirova s ​​...